Imizi mveliso yokuthengisa Umhlaba kunye neRhafu kwiRealWW
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iqashiso lomhlaba Umhlaba weMizi-mveliso
I-1-10 yoluhlu lwe-28
Umhlaba wezoMveliso uyathengiswa eNamanve
Umhlaba uyathengiswa. Indawo: namamve. Ubungakanani beplothi: ii-10 iihektare. Ukubuza ixabiso 3Bnshs. Lo mhlaba umi kwindawo ebekwe kakuhle etyebileyo nenqabisekileyo enamanzi kunye nombane. Ilungele izindlu eziWare kunye namashishini. Inesihloko sokulungela umhlaba seMailo ngaphandle kokuncamathela. C / o Ikhowudi ye-Agt 1 Ifowuni ...
Mukono kuMbindi woMbindi (e-Uganda)
umbono Umhlaba weMizi-mveliso ishicilelwe ngenyanga 1 edlule
Umhlaba wezoMveliso uyathengiswa eMukono
Umhlaba wentengiso uthengiswa Indawo: Mbalala, Mukono Plot size: 3 acres Asking ixabiso: 180M ngehektare nganye. I-tenure: Isihloko somhlaba wabucala. Isicwangciso sobuchule sibekwe ngaphakathi kwindawo ephuhlisiweyo ekufikeleleni ngokulula kwendlela. Inamanzi kunye namandla kwisiza. Iplothi ilungele ukusetyenziswa kwemizi-mveliso eMbalala ...
I-5 iihektare ngokugqibeleleyo yendawo eyiyo ngaphakathi kwepaki yezamashishini eNamanve ngeendlela ezingena ngeendlela, amandla kunye namanzi. Ukuqeshisa ngumhlaba okhululekileyo kungabikho nto ibekiweyo Ixabiso lokuthengisa yi-Usd 485,000 USD kuyo yonke ihektare ye-5. C / o agt Khowudi 1
2. I-5 iihektare ngokugqibeleleyo yendawo eyakhiwe ngaphakathi kwepaki yezamashishini eNamanve ngeendlela ezininzi zokungena, amandla kunye nobunini bamanzi ngumhlaba omkhulu ongenakho ukubanjiswa. Ukubuza ixabiso yi875M yazo zonke iihektare C / o agt Code 1
Iihektare ze10 ziyathengiswa eNamanve e220m ngehektare nje ecaleni kwendlela enkulu enezitayile ezilungileyo ngomatshini wefektri.
I-8 Acres zombini ephindaphindiweyo kunye neenjongo zokurhweba ezikummandla ophucukileyo onokhuseleko oluqinisekileyo kwiNamanve Industrial Area ngexabiso le-400 yezigidi zeerandi ngehektare nganye.
Umhlaba oRhwebelana noMhlaba uyathengiswa eMbalala
Indawo yayo eyi-10 ekwi-Mbalala Mukono .its endulini kwaye yome.imayile enye kwikhilomitha ukusuka kwindlela enkulu.kulungile kumzi-mveliso okanye kwilifa
umbono Umhlaba weMizi-mveliso ishicilelwe kwiinyanga 2 ezidlulileyo
I-1.1 iihektare zomhlaba eNamanve park park.Its mailo land isihlokoIts umhlaba owomileyo akukho mfuneko yokuzaliswa kwebhanki.
Ii-1.6 iihektare zokuqeshisa zibambe uMhlaba okwipaki yezamashishini eNamanve Mukono.3 yamandla esigaba kunye negridi yamanzi esizwe iyafumaneka.Iisele sele igcwalisiwe kwaye ihleli ilungele ukwakhiwa.
Umhlaba oyintloko we-KIBP, Namanve. Ngasemva kokurhweba ngaphandle. Umhlaba olungileyo ziimitha ze-200 ukusuka kwi-New Jinja Expressway kunye ne-km enye ukusuka kwi-SGR amaxabiso amahle nge-350m nge-acre nganye.